WHO oo sheegtay in isbedelka Cimilada uu khatarta ugu weyn ku yahay caafimaadka dunida qarniga 21-aad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWHO oo sheegtay in isbedelka Cimilada uu khatarta ugu weyn ku yahay caafimaadka dunida qarniga 21-aad
December 4, 2019 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Soomaaliya ayaa kamid ah wamada ay isbedelka cimilada saameyn weyn ku yeelatay. [Sawir Hore]
Geneva-(Puntland Mirror) Isbedelka Cimilada ayaa khatarta ugu weyn ku ah caafimaadka dunida qarniga 21-aad, sida ay sheegtay haayada caafimaadka adduunka ee WHO.
Warbixin dhowaan la soo saaray, waxay WHO ku sheegtey in xirfadleyda caafimaadku uu waajib ka saaran yahay in ay dadka ka difaacaan dhibaatooyinka cimilada, faafitaanka cudurada faafa iyo saameynta nafaqo-xumada iyo sidoo kale in ay daaweeyaan dadka uu ku dhacay kansarka iyo cudurada kale ee aan la-kala-qaadin ee ay sababaan wasakhowga deegaanka.
Warbixinta ayaa looga golleeyahay in kor loogu qaado wacyiga saameynta caafimaad ee isbedelka cimilada.
WHO waxay sidoo kale ugu baaqday bulshada caafimaadka adduunka in ay codkooda ku daraan baaqa loogu yeerayo heshiis cimilo oo adag oo wax ku ool ah.
Heshiiska cimilada ayaa ujeedkiisu yahay in lagu yareeyo isbedelka cimilada laguna hagaajiyo caafimaadka, oo ay kamidtahay yareynta tirada dhimashada kansarka iyo cudurada ku dhaca neef-mareenka iyo wadnaha oo ay keenaan wasakhowga hawada.
Heshiiska waxaa ka go’an in uu gacan ka geysto horumarinta iyo hirgelinta tillaabooyinka lagu xaddido isbeddelka cimilada laguna ilaaliyo dalalka, bulshooyinka iyo goobaha shaqada.
October 10, 2016 Itoobiya oo ku eedaysay wadamo shisheeye in ay dabada ka riixayaan banaanbaxyada Itoobiya
December 7, 2017 Donald Trump oo iclaamiyay in Qudus ay tahay caasimada Israel
March 30, 2019 Madaxweyne Deni oo gaaray Boosaaso, sheegayna in uu wax ka qaban doono nabadgelyada magaalada
Mogadishu-(Puntland Mirror) A huge blast and gunfire have been heard in the Somali capital, Mogadishu this night, according to the residents. Residents in the capital told to the Puntland Mirror that they heard a huge [...]
Afhayeenkii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb oo Muqdisho lagu dilay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afhayeenkii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb ayaa kooxo hubaysan oo aan la aqoon haybtooda ku dileen gudaha magaalada Muqdisho maanta oo Sabti ah, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Maxamed Cumar Xaafey ayaa gaari [...]